Maqaallada Cilmi-baarista - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Ku saabsan MADR
Qiimaha Muhiimka ah
Gargaarka Labada Dhinac
Ka hortagga dulmiga
Barnaamijyada iyo Farsamada
Khadadka Degdega ah
Caafimaadka iyo Fayo-qabka
Sharciga iyo Amniga
Waxbarashada caanka ah iyo ficil toos ah
Cod, Filim, iyo Fiidiyow
Qeybaha cilmi baarista
Bogga ugu weyn/Qeybaha cilmi baarista
Qeybaha cilmi baarista2021-03-12T14:17:53-05:00
Jaamacadda Johns Hopkins Press
Gacanka Ayaa Na Midoobaya: Fiyatnaamiiska Mareykanka ee Black New Orleans East
Suuqa Hilibka ee King iyo Raashinka ayaa fadhiya dhamaadka woqooyi ee buundada Broad Street ee qaybta bartamaha magaalada New Orleans. Markii milkiilaha dukaanka Mike Tran uu ku soo noqday King lixdii toddobaad ee ay socdeen duufaantii Katrina, wuxuu helay kaliya qolof wixii markii hore jiray.
Machadka Qalinjabinta ee Goddard College
Bulshada Caawinta iyo Raali ahaanshaha: New Orleans iyo Dhaqaalaha Midnimada
Wax soo saarkan ugu dambeeya wuxuu sahaminayaa sida muujinta dhaqaalaha midnimada ay ugu shaqeyneyso sidii tabo cusub oo bulsheed oo leh suurtagalnimada in wax laga beddelo xaaladda dhaqaale ee hadda jirta lana horumariyo dimuqraadiyadda dhaqaalaha.
Joornaalka Caalamiga ah ee Yaraynta Khatarta Musiibada
Dib u eegis ku saabsan tabarucidda aan rasmiga ahayn ee xaaladaha degdegga ah iyo musiibooyinka: Qeexitaan, fursado iyo caqabado
In kasta oo nidaamyo maarayn deg-deg ah oo takhasus sare leh oo karti leh, haddana muwaadiniinta caadiga ahi caadi ahaan waa
marka ugu horeysa goobta xaalad deg deg ah ama musiibo, oo ku sii nagaada muddo dheer ka dib marka adeegyada rasmiga ah ay joogsadaan.
Shaybaadhka Shaybaadhka Superstorm
Sheeko laba Sandys ah
Haddii aan ka fikirno Hurricane Sandy inay tahay cimilo daran oo ku dhufatay gobolka New York Oktoobar 29, 2012, markaa duufaanku wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee taariikhda waddanka, oo dilaa tobaneeyo qof, oo saameeya boqolaal kun, iyo waxyeello badan sida $ 75 bilyan oo khasaare dhaqaale.
Machadka Kennedy Machadka Anshaxa
Jawaab-bixiyeyaasha Jawaab celinta Faafida: Dhibaatada COVID-19 oo ah Xaalad Daraasad ku Saabsan Gargaarka Wadajirka ah
Marka maamulka dhexe uu ku guuldareysto howlaha bulshada muhiimka u ah, iskaashiga labada dhinac, wadajirka, iyo aasaaska aasaasiga ayaa si isdaba joog ah u soo baxa iyadoo dadku ay dabacsanaan ku saleeyaan shabakadaha aan rasmiga aheyn iyo ururada bulshada rayidka ah.
Ka-dhaafitaanka Musiibada ee Musiibada ah: Isbedelada Dhaqdhaqaaqa Bulshada ee New Orleans kadib duufaantii Katrina
Magaalada New Orleans, dabayaaqadii xagaagii 2008, xuska sanad-guuradii saddexaad ee Duufaantii Katrina waxaa lagu calaamadeeyay u diyaar garowga Duufaanta Gustav.
Adkaysiga: Xeerarka Caalamiga ah, Dhaqanka iyo Dood-wadeenada
'Dib ugu soo laabashada' Capitalism? Firfircoonida madaxbannaan ee dhaqdhaqaaqa ee qaabeynta khudbadaha adkaysiga iyo isbeddelka musiibada ka dib
U adkaysiga ayaa lagu dhaleeceeyay dhinacyo badan iyadoo diiradda la saaray isku dayga ah in dib loo soo celiyo ama loo ilaaliyo xaaladda hadda jirta ka dib khalkhal.
Wadahadal ku saabsan Juqraafiga Aadanaha
Daryeelidda juqraafiyeed: Is-dhexgalka 'COVID-19' iyo dib ugu noqoshada is-caawinta
Gargaarka is-kaashiga ahi waa aasaaska aasaasiga u ah bulshooyinka aadanaha oo dhan, isfahamka waxaa lagu muujiyey hufnaan muuqata inta lagu jiro xilliyada dhibaatooyinka. Cudurka faafa ee coronavirus wuxuu keenay juqraafiyo daryeel wada jir ah oo ku saabsan gargaarka labada dhinacba gargaar deg deg ah iyadoo lagu guuldareystay caasimadnimada iyo tan gobolka labadaba.
Isbedelka Sayniska Cognitive
Naxariista Musiibada: Fahmitaanka iyo fidinta barwaaqo sooranka ee dhibaatada kujira
Sidee dadku u dhaqmaan markay musiibooyinku dhacaan? Xisaabaadka warbaahinta caanka ah
waxay muujinayaan argagax iyo naxariis daro, laakiin dhab ahaantii shaqsiyaadka inta badan way iskaashadaan oo daryeelaan midba midka kale inta lagu jiro dhibaatooyinka. Waxaan kusoo koobayaa cadeymaha caynkaas ah
'Naxariis masiibo', ka wada hadal xididdadiisa, oo ka fiirso sida loogu beeri karo waqtiyo aan caadi ahayn.
Cilladda musiibada ee daba-dheeraatay: Barokaca, hanti-wadaagga musiibada, iyo ka saaridda dadka saboolka ah ee New Orleans
Dad badan oo degan New Orleans oo 2005 ku barokacay duufaannada Katrina iyo Rita iyo guul darrooyinkii xigay iyo daadadkii weli way barakaceen. La noolaanshaha walaaca muddada-dheer ee la xiriira luminta qoyska, bulshada, shaqooyinka, iyo amniga bulshada iyo sidoo kale halganka joogtada ah ee nolosha wanaagsan ee duruufaha nolosha ee aan degganayn, waxay muujinayaan waxa aan ugu yeerayno "cillad ba'an oo masiibo ah."
Bulshada Cilmi-nafsiga ee Australiya
Buug-gacmeedka Awood-siinta Is-beddelka Cimilada: Xeeladaha cilmu-nafsiga ee wax looga qabanayo isbedelka cimilada
Dukumentigan waxaan ku soo bandhignay sideed fudud laakiin muhiim ah "ficil ugu fiican" fikradaha sayniska cilmu-nafsiga si looga caawiyo dadka inay la heshiiyaan oo ay la qabsadaan saameynta qoto dheer ee isbeddelka cimilada, si ay ugu sii jiraan ku lug lahaanshaha dhibaatada, fiiri halka ay dhaqankooda u ciyaarayaan qayb ka mid ah, oo ka qaybqaado isbeddelka degdegga ah ee bulshada si loo soo celiyo jawi nabdoon
Willow Brugh, Galit Sorokin, iyo Yaneer Bar-Yam
Isku-darka Nidaamyada loo qaybiyey iyo kuwa dhexe ee ka jawaab celinta Musiibada
Moodooyinka xakamaynta qaabdhismeedku waxay xukumayeen qaabdhismeedka ururada kumanaan sano. Waxaa sii kordheysa, awooda ururada loo qeybiyey ee qabashada howlaha adag ayaa soo muuqanaya. Awoodda nidaamyada go'aan gaarista ee dhexe waxay kuxirantahay joogteyn, sii wadid, iyo helitaanka ilaha. Si kastaba ha noqotee, qaabdhismeedka asalka ah ee keena awoodahan ayaa sidoo kale xaddidaya awoodda looga jawaabayo macluumaadka aadka u adag. Warqaddan waxaan ku sahamineynaa xoogga ururka isku-darka Sandy ee isku-caawinta.
Shabakad Cusub oo Dawlada Hoose ah
Bulshooyinka vs Coronavirus: Kordhinta Gargaarka Mutual
Warbixintani waxay ka hadlaysaa qayb muhiim ah oo ka mid ah jawaabta umadda ee ku saabsan COVID-19:
dadaal heer sare ah, dadaal deg deg ah ee bulshada. Dadaalladaas
ha ka tarjumin xiriirka 'caawiye iyo caawin' soo jireenka ah, kaas oo
adeegyada guud iyo waaxda samafalka rasmiga ah. Way adeecaan
waajibaadka qotada dheer ee is weheshiga: muwaadiniinta xorta ah ee isu keenaya inay difaacaan kuwooda
bulshada, iyo kuwa ugu nugul, oo ka soo horjeeda halista dhammaan.
Mashruuca Nidaamka Soo socda
Bulsho, Dimuqraadiyad, iyo Kaalmo isweydaarsi: Dhinac laba Power iyo wixii ka dambeeya
Shan sano ka hor, Gugii Carabta wuxuu dib u soo ceshaday goobihii dadweynaha ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, isagoo tusinaya jiil cusub fursadaha iska caabinta hal-abuurka ah iyo male-awaalka siyaasadeed iyadoo lagu jiro xitaa duruufaha ugu cadaadiska badan.
Abaabulka Bulshada ee Qurbajoogta Katrina: Jinsiga, Jinsiga, iyo Dacwadda Sanduuqa Lacagta Gargaarka Duufaanta ee Dadka
Saacado gudahood markii ay ku dhufatay duufaanta Katrina, qabanqaabiyaasha cadaalada bulshada waxay ku biireen malaayiin Mareykan ah oo ka jawaabaya dhibaatada bini'aadanimo ee duufaantu kicisay. Ka sokow abaabulka si loo daboolo baahiyaha aasaasiga ah, hase yeeshe, qabanqaabiyeyaashu waxay isku dayeen inay abuuraan jawaab wadareed, siyaasadeed oo ku wajahan wixii ay u maleegeen khayaanada dowladda kahor, intii lagu jiray, iyo kadib duufaantii.
Fahamka Fowdada: Qaab-dhismeedka Fahamka Musiibooyinka
Koorsadani waxay isku xireysaa fikradaha iyo caddeynta ku saabsan adkeysiga. Sideen ugu ilaalin karnaa nafteena iyo caruurteena adkeysi mudada adag ee musiibada aan la aqoon mustaqbalka?
Jaamacadda Kobanheegan ee Gobolka California, Pomona
Dukumiintiyada dhismaha ee caddaaladda cimilada: Hababka naqshad dimoqraadiyeed ee bulshooyinka u adkaysan kara cimilada
Isbedelka cimiladu wuxuu si aan kala sooc lahayn u saameeyaa bulshooyinkii horeyba uga horyimid cadaadiska qaabdhismeedka. Qaar badan oo ka mid ah dadaalada qorsheynta adkeysiga guud waxay diirada saaraan kaabayaasha jirka. Dadaalladan ayaa, marar badan waxay keeneen barakac iyadoo loo marayo ifafaalaha Green Gentrification. Qaab kale oo ah qaabeynta iyo u qorshaynta u adkeysiga cimilada ayaa tixgelinaysa doorka ku xirnaanta meesha, raasamaal bulsheedka, iyo aqoonta maxalliga ah ee u adkaysiga aafada, halkan waxaa loogu yeeraa kaabayaasha xiriirka.
Jariidada 'Radical Housing Journal'
Covid-19 iyo halganka guryeynta: sameynta (re) sameynta dhaqaale xumida, hantiwadaaga musiibada, iyo ku soo noqoshada caadi
Isagoo si wada jir ah wax uga qoraya mudnaanta qaraabada guryaheena (inta badan aan sugnayn), waxaan qorsheynay boos si aan ugu milicsano udub dhexaadka guryaha iyo guriga dhibaatada Covid-19.
Joornaalka Ingiriiska ee Shaqada Bulshada
Decolonising Shaqada Bulshada ee Musiibada: Caddaaladda Deegaanka iyo Ka Qeybgalka Bulshada
Dabeecadda aadanaha, gaar ahaan nidaamka dhaqaale ee neo-liberal ee qiimeeya koboca aan xadidnayn iyo soo saarista aan la sii wadi karin ee kheyraadka dabiiciga ah, ayaa gacan ka geysanaya isbeddelka cimilada iyo sii xumeynta halista musiibada.
Musiibo iyo Utopia: Dib u Milicso 3/11
Maqaalkani wuxuu u qaadanayaa fikradda 'musiibada utopia' inay tahay bar bilow ah oo dib loogu noqdo saameynta masiibadii saddex-geesoodka ahayd ee Japan ee 11-kii Maarso 2011 (3/11). Waxaa badanaa la ogaaday in masiibooyinku ay horseedi karaan hilowga utopian ee adduun ka wanaagsan, kuwaana mararka qaarkood, waxay u horseedi karaan isbeddel bulsho iyo siyaasadeed oo muddo dheer socda.
Horumar dhanka Juqraafi ahaaneed
Siyaasadda Musiibada: Qodobbada tilmaamidda ee isbeddelka ku habboon ee la-qabsiga ee Nidaamyada Sociopolitical
Baaqyada bulshada isbeddelka cimilada iyo welwelka baahsan ee xagga nabadgelyada aadanaha ayaa dib u soo nooleeyay xiisaha geograafiyaasha iyo kuwa kaleba ee ku saabsan siyaasadda musiibada. Dhaxalgal cilmi baaris juquraafiyeed oo ku saabsan sababaha siyaasadeed iyo cawaaqib xumada musiibada ayaa dib loo eegay oo lagu dhisay si loo dejiyo qaab loogu talagalay falanqaynta goobaha siyaasadeed ee musiibada ka dib.
Jaamacadda Delaware Xarunta Cilmi-baarista Musiibooyinka
Masiibooyinka iyo Caafimaadka Maskaxda: Mabaadi'da daweynta ee laga soo qaatay daraasadaha Musiibada
Maxay masiibooyinka baaxadda weyn u soo saaraan xaalado maskaxiyan caafimaad qaba oo kale?
Maxay yihiin mabaadi'da daweynta ee aan ka dheefsan karno daraasad ku saabsan isbeddelada aadanaha ee dabiiciga ah ee ka dhex dhaca kuwa ka badbaaday musiibada?
Dib-u-eegista Khataraha Dabiiciga ah
Musiibooyinka oo ah Wakiilo Isbadal Bulsho ku yimaada Soo kabashada iyo Dib u dhiska
Warqadani waxay muujineysaa daraasado kala duwan oo ku saabsan ka soo kabashada musiibada iyo dib u dhiska, qaarkood waxay muujinayaan in isbadalka siyaasadeed, dhaqaale, iyo bulsheed aysan u badneyn musiibooyinka ka dib; qaar waxay muujinayaan in isbeddelku si joogto ah u dhaco musiibooyinka ka dib; iyo waliba kuwa kale oo muujinaya in labaduba ay run yihiin, iyadoo kuxiran qofka aad tahay.
Musiibooyinka oo ah Fursado Isbadal loogu talagalay Joogtaynta
Aqoonyahanadu waxay muujiyeen doorka khalkhalka iyo qalalaasaha ee awood u siinaya isbedelka nidaamka ee ku waara. Tusaale ahaan, masiibooyinku, duruufaha qaarkood awgood, waxay u noqon karaan kuwo kiciya isbedelkaas.
Jaamacadda Oxford University
Elites iyo Argagax: Cabsi dheeraad ah ayaa ka badan cabsida nafteeda
Astaamaha argagaxa waxaa loogu tala galay xubnaha bulshada guud. Halkan, waxaan ku weydiinaynaa xiriirka ka dhexeeya aqoonyahannada iyo argagaxa. Waxaan dib u eegeynaa cilmi baarista hadda socota iyo aragtida ku saabsan argagaxa, oo ay ku jiraan dhibaatooyinka aqoonsiga markii ay dhacday. Waxaan soo jeedineynaa seddex xiriir: aqoonyahanno ka baqaya argagax, aqoonyahano argagax keenaya iyo kuwa caaqil ah oo argagaxsan.
Deegaanka & Magaaleynta
Kooxaha degdegga ah iyo mutadawiciinta iskaa wax u qabso ah ee ka jawaabidda musiibooyinka magaalooyinka
Jawaabaha iskaa wax u qabso ah ee iskood isu abaabulay, "soo ifbaxa" kooxaha iskaa wax u qabso ah iyo shakhsiyaadka ayaa ah muuqaalka guud ee aafooyinka magaalooyinka. Waxqabadyadooda waxaa ka mid ah goobidda iyo samatabbixinta, daabulidda iyo qaybinta sahayda gargaarka, iyo bixinta raashin iyo cabitaan dhibbanayaasha iyo shaqaalaha gurmadka.
Dhacdooyinka Cimilada Xasaasiga ah Fursadaha loogu Jiro Jinsiyadda furan
Abaaraha, daadadka iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ee la xiriira isbeddelka cimilada waxay ka tirsan yihiin noocyo halista adduunka ah oo saameyn hoose ku leh dhaqaalaha iyo waxsoosaarka degsiimooyinka, wadajirka bulshada iyo hay'adaha maamulka. Tani waxay ka dhigan tahay caqabadaha sii kordhaya ee istiraatiijiyadaha la qabsiga iyo maaraynta musiibada.
Dhacdooyinka ba'an iyo musiibooyinka: daaqad fursad isbadal? Falanqaynta isbeddelada hay'adeed, hay'adeed iyo siyaasadeed, jawaabaha rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn kadib musiibooyin waaweyn
Musiibo la xiriirta khataraha dabiiciga ah waxay u horseedi kartaa isbeddello muhiim ah - mid togan ama mid taban - oo ku yimaada nidaamyada dhaqan-bulsheed. Markay musiibooyin dhacaan, fiiro gaar ah ayaa la siiyaa saameynta tooska ah ee musiibada iyo sidoo kale howlaha gargaarka iyo soo kabashada. In kasta oo diiraddani muhiim tahay, haddana waxaa xusid mudan in cilmi baaris yar lagu sameeyay astaamaha iyo horumarka isbeddelka ay keeneen masiibooyinka.
Dhakhaatiirta Mas'uuliyadda Bulshada
Kuleylka, Dabka, Biyaha: Sidee Isbedelka Cimiladu u Abuurtay Degdega Caafimaadka Dadweynaha
Isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa caafimaadka dhammaan dadka Mareykanka - hadda. Ma jiraan wax ka reeban. In kasta oo la qabsiga loo baahan yahay uu yareeyn doono halista dadka oo dhan, isla markaaba, hoos u dhac weyn oo ku yimaada qiiqa gaaska lagu sii daayo ayaa hor istaagi doona xaalad caafimaad oo deg deg ah. Carruurta, waayeelka, iyo kuwa leh xaalado horay u jiray ama bulsho ahaan kuwa ugu nugul ayaa noqon doona kuwa ugu nugul waxyeelada isbadalka cimilada.
Dhakhtarka cilmu-nafsiga Mareykanka
Ka Faaideysiga Awoodda Is-Kaashiga, Is-bahaysiga, Hoggaaminta, iyo u-doodista Inta lagu jiro COVID-19
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu iftiimiyay xeerarka, qaababka, iyo qaabdhismeedka awoodda ee Mareykanka ee mudnaanta u leh kooxaha qaarkood dadka kale. Maqaalkani wuxuu qeexayaa COVID-19 inuu yahay soojire aan horay loo arag oo loogu talagalay isbeddelka bulshada ee hoosta ka xarriiqaya baahida loo qabo xalal badan iyo xallinta qaybaha kala duwan si wax looga qabto isbeddelada nidaamka ee lagu hagaajinayo sinnaanta caafimaadka dhammaan.
Raadinta Goob Wadaag: Shaqada Gargaarka ee Ka Dib Katrina New Orleans oo ah Masalo Mareykan ah oo ku Saabsan Jinsiyada iyo Rabshada Jinsiga
Maqaalkani wuxuu bixiyaa baaritaan isku-dhafan oo ku saabsan jinsiga iyo jinsiga
isdhexgalka macnaha guud ee masiibada “soo kabashada” ee New Orleans.
Iyada oo ku saleysan daraasad kiis oo ku saabsan hay'adda gargaarka aasaasiga ah, Common
Wadajirka Dhulka, natiijooyinka waxay muujiyeen in maqnaanshaha dhaqanka isgoyska, jinsi nimada ay sii fogeyneyso cunsuriyada iyo cunsuriyada ay sii fogeyneyso jinsiga.
Ragga iyo ragga ee dhaqdhaqaaqa bulshada ee dib u dhiska kaliya ka dib duufaantii Katrina
Aqoonyahanada jinsiga iyo musiibada waxay xusayaan inta lagu jiro iyo kadib musiibada doorar dhaqameedka iyo qaababka ama la buun buunin karo ama la rogi karo. Kala-baxa ku-meel-gaarka ah ee nolosha caadiga ah wuxuu fududeyn karaa dib-u-noqoshada qaababka xad-dhaafka ah ee jinsi-jinsi ama, liddi ku ah, ku xad-gudubka hababka caadiga ah iyo soo saarista fursado cusub oo loogu talagalay ku dhaqanka jinsiga.
Jaamacadda Gobolka Joorjiya
Dhaqdhaqaaqa Kahortaga Musiibada: Qaab-dhismeedka Is-Tabaruca Kadib-Katrina ee Qaybta Sagaalaad ee New Orleans, Louisiana
Qoraalkan wuxuu baaraya khibradaha iyo dhaqanka tabaruceyaasha gargaarka musiibada. Qoraalkani wuxuu ku saleysan yahay shaqooyinka qowmiyadeed ee laga qabtay muddo konton iyo saddex maalmood ah xagaagii 2007 duufaantii dambe ee Katrina Ward Sagaalaad ee Sagaalaad ee New Orleans, Louisiana.
Gargaar Wadaagga ah iyo Qaybinta Sanduuqa Occupy Sandy
Kani waa qoraal gacmeedkii martida ee aan ku bixiyay MIT 3874G: Aafada Hanti-Wadaagga, koorso uu soo diyaariyey soona gudbiyey Dr. Warren Steele oo ka tirsan Kulliyadda Macluumaadka iyo Daraasaadka Warbaahinta ee Jaamacadda Western Ontario. Mawduuca casharka maalinta ayaa ahaa 'Istaraatijiyadaha Bixitaanka.'
Warbixinta NACLA ee Ameerika
Gargaarka Wadajirka ah iyo Badbaadinta sida iska caabinta Puerto Rico
Oo ay la soo gudboonaatay duulaan musiibooyin ah, maamul xumo dawladeed oo
dhibaatooyinka naf-gooyada ah, iyo cadaalad darrada gumaysiga, Puerto Rican
bulshooyinku waxay sharad ku galeen naftooda. Dadaalkooda wadaagga ah ayaa markhaati ka ah
labada awood ee aasaaska aasaasiga ah iyo baaxadda dayacaadda gobolka.
Tilmaamaha Waxbarista Buugga Gargaarka Lacagta ah ee 'Dean Spade'
Muddo sanado ah, waxaan ka murugeysanahay sida kaalmooyinka is-caawinta ah ay marar dhif ah loogu baro fasallada ku saabsan isbeddelka bulshada iyo dhaqdhaqaaqa bulshada. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhismaha dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka, oo inta badan aad loogu abaabulo ardayda inay wax ka bartaan. Waxaan rajeynayaa inay tani is beddeli doonto iyadoo fikradda is-kaashiga labada dhinac ah uu sii faafayo. Waxaan sameeyay Tilmaanta Barista si aan ula socdo buuggayga cusub ee ku saabsan gargaarka labada dhinac ah oo ay daabacday Verso Books bishii Oktoobar, waxaan rabay inaan la wadaago hadda haddii ay jirto cid ka fikiraysa buugga manhajka dayrta.
Su'aalaha Akhrinta Fasalka Gargaarka Mutual iyo Syllabus
Waxaan cashar dhigayaa fasalkan dayrta Jaamacadda Chicago oo la yiraahdo Queer iyo Trans Mutual Aid ee Badbaadinta iyo Abaabulka. Waa kan manhajku. Waxaan halkan ku soo dhejin doonaa su'aalaha doodda iyo laylisyada fasalka toddobaad kasta, sidaa darteed waad u isticmaali kartaa haddii aad keligood wax akhrinaysid ama aad koox koox wax u akhrinaysid.
Wax soo baara Bioethical
Dhammaan ma xuma: Dhimbiillada rajada ee Musiibo Caalami ah
Diirad saarida wadahadalada ku saabsan arimaha anshaxa ee laxiriira Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu kujiray dhibaatadii weyneyd ee ay sababtay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara natiijooyin wax ku ool ah oo lama filaan ah oo waliba ka soo baxa musiibada adduunka.
Hawlgal Sandy: Ujeeddo Kacaannimo iyo Isgaarsiin
Warqaddaydu waxay eegaysaa adeegsiga teknolojiyada isgaarsiinta ee Occupy Sandy, oo ah shabakad gargaar oo ay markii horaba soo saareen dadka u ololeeya Occupy Wall Street si wax looga qabto burburka duufaantii Sandy.
Jaamacadda John Hopkins Press
Ilaalada Hubeysan iyo Dharka Kente: Katooliga Afro-Creole iyo Dagaalkii loogu talagalay St. Augustine Parish ee Post-Katrina New Orleans
Kaniisadda St. Augustine, oo si weyn loogu tixgeliyo inay tahay kaniisadda ugu da'da weyn Afrikaanka-Ameerikaanka ah ee waddanka ku yaal, ayaa qorshuhu ahaa in la xidho lix bilood oo keliya ka dib duufaantii Katrina. Tan iyo markii la furay, St. Augustine wuxuu had iyo jeer ahaa xiriir dhaqameed muhiim u ah bulshada Afro-Creole ee magaalada, xirnaanshaha kaniisadda waqtigii loogu baahnaa waxay ahaan lahayd dharbaaxo xun.
Siyaasadda adkeysiga: laga bilaabo isbeddelka illaa qaran dumis
Dareen baahsan oo hubaal la'aan ah ayaa hareeyay shaqsiyan iyo nolol wadareed maanta. The
isbedelada siyaasadeed, dhaqameed, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo deegaanka, neoliberal
horumarka ayaa keenaya, soosaara amni darrada miisaanka oo ka bilaabmaya meco kulka illaa iyo
Kahortaga iyo Maareynta Musiibada
Isbarbaryaaca awooda: kala soocista aqoonta iyo awooda ee howlaha gurmadka musiibada caalamiga ah
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee ku lug leh dadka ku lugta leh howlaha gargaarka masiibada ayaa ah isku dubaridka kooxaha kale ee goobta jooga, xarunta, ururka hooyada ee dalka gudihiisa iyo la tacaalida xaaladaha aan la filayn. Dhibaatada dhexe waxay umuuqataa tan: shaqaalaha gargaarka masiibooyinka ama waxay leeyihiin aqoon ay ku ogaadaan waxa la sameeyo ama awooda ay ku sameeyaan.
Xiriirka Saddexdii biloodba mar
Isbarbar yaacyada mudnaanta iyo kaqeybgalka: Xaaladda Laanqayrta Cas ee Mareykanka
Falanqeyntan xasaasiga ah ee laanqeyrta cas ee Mareykanku (ARC) waxay su'aalo weydiineysaa hadalada daneeyayaasha ARC ee meesha ku sugan ka dib markii ay ka qeyb galeen dadaalada gurmadka musiibada duufaantii 2005. Qoraagu wuxuu adeegsadaa falanqaynta hadalka ee muhiimka ah isagoo hagaya qaabdhismeedka aragtiyeed iyo habka falanqaynta si uu uga tarjumayo sida luuqadda iyo dhaqanka ARC, heerar kala duwan, ay caadi u tahay Caddaannimada una ilaaliso mudnaanta Caddaanka.
Ka Qaybqaadashada Horizons Ka Qaybqaadashada iyo Awood Wadaagga Ururada Gargaarka Masiibooyinka
Ku xididaysan qaab-hawleedka cilmi-baarista waxqabadka, tani waa mid qoto dheer
sahaminta laba urur oo gargaar masiibo ah oo wadajira: Gundhiga Guud iyo Hawlgalkii Sandy, iyo waxa kadhigaaya qaabkooda mid kaladuwanaansho iyo wax ku ool ah.
Wadaad Musiibo Aabbe: Moodel Isgoys ah oo Fahamka Musiibada Toban sano kadib duufaantii Katrina
Sannadkii 2015 ayaa loo asteeyey sannad-guuradii tobnaad ee Duufaantii Katrina, taas oo ka dhigtay meel ka baxsan New Orleans Ogosto 29, 2005. Qisooyinka halista ah waxay tilmaamayaan sinnaan la'aanta midab-takoorka iyo dhaqaalaha ee macnaha guud ka dhigtay musiibada. Si kastaba ha noqotee, inta badan sheekada Katrina waxaa lagu xaddiday dayacaaddeeda falanqaynta haweenka isgoysyada. Maqaalkan waxaan ku soo bandhigayaa qaab lagu sameeyo dareenka isgoyska Hurricane Katrina iyadoo casharro loogu talagalay barashada aafooyinka kale.
Jaamacadda Duke University Press
Daryeelka xagjirka ah: Istaraatijiyadaha Badbaadinta ee Waqtiyada aan la hubin
Daryeelka ayaa dib u galay zeitgeist-ka. Isla markiiba 2016
Doorashadii madaxweynenimo ee Mareykanka, barnaamijyada # selfcare ayaa ku qarxay dhamaan qeybaha warbaahinta. Laakiin dhammaan feejignaanta caanka ah ee ku saabsan caadooyinka is-daryeelista, wadajirka cusub
dhaqdhaqaaqyo ayaa sidoo kale soo ifbaxay taas oo ah dhaqan xumo xagga akhlaaqda ah inay ku dhaqmaan - ku
daryeelku - waa xoog wade dhexe.
Falanqaynta Falsafada Xagjirnimada
Falsafada xagjirka ah iyo siyaasada inta lagu jiro Xiisada Cimilada iyo Faafida Coronavirus
Markii aan, tifaftirayaasha arintan gaarka ah, go'aansanay mawduuca siyaasada, falsafada xagjirka ah, iyo isbadalka cimilada, kuma aanan fikirin in aan ku dhameystiri doonno mashruucan waqti masiibo ah, dhibaato u muuqata "si dhakhso leh" marka loo eego "rabshadaha gaabiska ah" ee dhibaatada cimilada.
Qorsheynta Aragtida iyo Tababbarka
Adkaysiga xagjirka ah: Is-maamulka is-maamulka ee Qorshaynta Soo-kabashada Musiibada Kadib iyo Tababbarka
Ujeeddada warqaddani waa in la horumariyo fikradda u adkaysiga xagjirnimada. Waxaan sidaa ku sameeynaa anagoo ka soo qaadaneyna aragtida qorshaynta xasilloonida iyo fowdada. Adkaysiga xagjirnimada ayaa jira marka dadku abaabulaan awooddooda ay ku maareeyaan arrimahooda naftooda. Awooddani waxay badiyaa soo baxdaa ka dib isku dhac agonistic ah oo leh awood xukun.
Akhrinta Duufaanta Katrina: Jinsiyada, Fasalka, iyo Biyoolajiyadda Baadhista
Meydka Emmett Till wuxuu yimid gurigiisa Chicago bishii Sebtember 1955. Cunsuriyiinta caddaanka ah ee Mississippi ayaa jirdil, jarjaray, oo dilay wiilka yar ee 14-jirka ah ee Afrikaan-Mareykan ka ah ee ku fooriyey haweeney cadaan ah. Go'aansaday in la muujiyo wajiga naxdinta leh ee foosha xun iyo jirka qalloocan ee cunugga oo muujinaya muujinta nacaybka iyo dilka midabkiisa, Mamie Till, wiilka hooyadiis, waxay ku adkaysatay in naxashka, uu dhexgalay AA Ranier Funeral Parlor oo ku taal Koonfurta dhinaca Chicago, be furan afar maalmood oo dheer.
Xarunta Cilmi-baarista Musiibooyinka ee Jaamacadda Delaware
Cunto Rebel, Sahayda Weerarka: Isku-dhafka ka dib Weerarkii Xarunta Ganacsiga Adduunka
Weerarkii Xarunta Ganacsiga Dunida, in kasta oo ay ahayd musiibo aan horay loo arag, haddana waxay soo saartay waxyaabo badan oo ka mid ah astaamihii lagu arkay masiibooyinkii kale ee ka dhacay Mareykanka astaamahan oo kale waxaa ka mid ah isu imaatinka mutadawiciinta iyo tabarucaadka sahayda, kuwaas oo weligood ku qoran suugaanta.
Dhirta Magaalada & Cagaaran Magaalada
Waxyaabaha u baahan adkaysiga maxalliga ah: Beeraha bulshada ee Sandy City New York ka dib
Jardiinooyinka bulshada waxay taariikh ahaan door muhiim ah ka ciyaareen u adkaysiga bulshada-deegaanka ee Magaalada New York (NYC). Jardiinooyinkan wadaagga ah ee bulshada-loo wada-heli karaa ma aha oo kaliya inay taageeraan dhirta iyo duunyada si loo xoojiyo sugnaanta cuntada iyo adeegyada deegaanka, laakiin sidoo kale waxay kobciyaan bulshooyinka dhaqanka ah ee kobciya dhinacyada soo celinta iyo wadaagga ee dhaqankan bey'ada bulshada. A
Adkaysiga yaa leh? Juqraafiyeed Xasaasi ah oo soo ifbaxaya u adkaysiga cilmiga bulshada
Adkaysigu wuxuu si dhakhso leh u noqday halhays caan ah oo ay adeegsadaan dawladda, ururrada maaliyadeed ee caalamiga ah, NGO-yada, kooxaha bulshada iyo u dhaqdhaqaaqayaasha adduunka oo dhan. In kasta oo isticmaalkeedu aad u ballaadhan yahay, haddana weli waxaa jira jahwareer ku saabsan waxa adkaysi u yahay iyo ujeeddada laga leeyahay.
Shabakada Agaasimayaasha Joogtaynta Magaalooyinka
Hubs adkeysiga: U wareejinta Awoodda Bulshooyinka iyo Kordhinta Awooda Bulshada
Magaalooyinka Waqooyiga Ameerika, dadaal badan ayaa loo baahan yahay si kor loogu qaado adkeysiga sinnaanta xudunta cimilada. Ilaa hadda, shaqada u adkaysiga bulshada badankeedu waxay diiradda saaraan aqoonsiga iyo maaraynta nuglaanta iyo halista iyadoo loo marayo habab kor-hoos ah oo inta badan ku guuldaraysta inay si macno leh ugu daraan istiraatiijiyad ku saleysan sinnaan iyadoo la tixgelinayo dadka ugu nugul.
Dib-u-soo-celinta: Dhulgariirkii Mexico City ee 1985 iyo Is-beddelka Caasimadda
Sebtember 19, 1985, 7:14 am dhulgariir gaarey cabirkiisa 8.1 ee qiyaasta qiyaasta wuxuuna soconayaa kudhowaad laba daqiiqo oo buuxa xeebta Mexico
La-talinta Cilmi-nafsiga Saddex-biloodle
Gargaarka musiibada ee la talinta musiibada, la-talinta, iyo u-doodista: Kiiska dab-damiska Waqooyiga California
Iyagoo adeegsanaya khibradeena xirfadeed ee gargaarka dabiiciga, iyo sidoo kale aragtida jirta, qorayaashu waxay soo bandhigaan qaab sinaan ku wajahan - Gargaarka Musiibo ee Caddaaladda Bulshada, La-talinta, iyo U-doodista.
Jaamacadda Waqooyiga Arizona
Isku duubni, maahan sadaqo: Gargaar iswada leh oo ku saabsan gargaarka masiibooyinka dabiiciga ah
Warqadani waxay diirada saaraysaa Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid (MADR), oo ah urur aasaasi ah oo bixiya gargaarka masiibada dabiiciga ah ee salka ku haya mabaadi'da gargaarka wadajirka ah iyo waxqabadka tooska ah ee iskiis ah. Iyadoo loo marayo kaqeybgale-u-fiirsashada aqoon isweydaarsiyo taxane ah iyo wareysiyo qaabdhismeed qaab-dhismeed leh oo lala yeeshay dhaqdhaqaaqayaasha iyo abaabulayaasha, cilmi-baaristani waxay baareysaa sababta ay shakhsiyaadka ugu dhiirrigelinayaan inay wax ka qabtaan shabakaddan aasaasiga ah, kana soo horjeedda ka-qaybgalka dadaallada kale ee looga jawaabayo masiibooyinka dabiiciga ah.
Midnimo Maaha Samofal: Caawinta Dhinacyada Loogu Talagaley Dhaqangelinta iyo Badbaadinta
Xilliga siyaasadeed ee hadda ka socda Mareykanka, oo lagu qeexay cimilada
dhibaatada, kordhinta xoojinta xuduudaha, weerarada waxtarka dadweynaha, xakamaynta carceral ballaadhan, kor u kaca qiimaha guryaha, iyo sii kordhaya garabka midig
populism, dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa bulshada ee bidixda iyo ururada ayaa wajahaya laba
caqabado gaar ah oo inkasta oo aysan ahayn wax cusub, ay yihiin kuwa degdeg ah.
Shaybaarka Cilmi-baarista ee Superstorm (SRL) waa cilmi-baaris wada-jir ah iyo qoritaan wadajir ah oo ka shaqeynaya sidii loo fahmi lahaa isbeddelada sida jilayaasha siyaasadda ee Magaalada New York, hoggaamiyeyaasha NGO-yada, kuwa u dhaqdhaqaaqa, mutadawiciinta, iyo dadka deegaanka ay ka fekerayaan arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo deegaanka ka dib duufaantii Sandy.
Naxariis ahaan sida Dhiirrigelinta Aasaaska Bulshooyinka Gargaarka-Wadaagga Aafooyinka ka dib
Bulshooyinka is-caawiya waxaa caadiyan looga dhisaa si iskood ah aagagga ay masiibadu ku habsatay. Noocyo la mid ah bulshooyin la sameeyay ka dib dhulgariirkii Tohoku iyo tsunami 2011. Xaaladdan oo kale, baaqyada wadashaqeyn ee u dhexeeya dhammaan dadka reer Japan sida Ganbaro Nippon ("sii wad, Japan" ama "halkaa ku laalaada, Japan") ayaa ka muuqday boodhadh iyo istiikarada magaalooyinka dalka oo dhan.
Bartilmaameedka Xididdada Musiibada: Shaqada Bulshada oo Burburineysa Nuglaanshaha Mariana, Puerto Rico kadib Duufaantii Maria
In kasta oo aan had iyo jeer loo aqoonsanayn sidan oo kale, masiibooyinku waa nidaamyo murugsan oo ku dhisan wax soo saarka bulshada ee nuglaanta. Aragtidan ayaa tixgelinaysa sida jawaabaha masiibooyinku sida caadiga ah loogu dhiso faham xad dhaaf ah oo ku saabsan waxa ay yihiin, waxayna ku doodeysaa in fahan badan, faham dhinacyo badan leh oo ku saabsan masiibooyinka ay nagu hagi karaan xalal wax ku ool ah.
Dabka Chicago ee 1871: oo ah qaab hoosaad kor loogu qaadayo gargaarka musiibada
Dadaallada samafalka ee xagga hoose ma u horseedi karaan soo kabasho masiibooyin ka dib? Caqliga caadiga ah iyo siyaasada guud ee casriga ah waxay soo jeedinayaan in dhibaatooyinka waaweyn ay u baahan yihiin awood dhexe si loo bixiyo alaabada gargaarka musiibada. Iyadoo la adeegsanayo sheeko cusub oo ah tabarucaad dhammaystiran iyo kharashyo laga soo uruuriyay diiwaanka taariikhda, warqadani waxay baareysaa dadaal samafal oo hoose ilaa kor ka dib mid ka mid ah musiibooyinkii dabiiciga ee ugu xumaa ee qarnigii sagaal iyo tobnaad: Chicago Fire ee 1871.
Golaha Shaqaalaha cusub
Musiibada ka dhex jirta Musiibada: Duufaanta Sandy iyo Dib-u-habeynta Dhibaatada Kadib
Dhamaanteen waxaan la kulanay dhibaatooyinka ba'an ee masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga aheyn ee ka dhacay America. " Markaa wuxuu bilaabay inuu hadlo af-hayeen kadib duufaantii Sandy ee ka dhacday Zuccotti Park bishii Luulyo 31, 2013, iyadoo dib loo xasuusanayo laba musiibo oo hore oo dhagaystayaashu si fiican u ogaayeen: Weerarkii Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Sebtember 11, 2001, iyo Duufaantii Katrina ee daadadka New Orleans bishii Ogosto 29, 2005
Annals of American Academy Siyaasadda iyo Bulshada
Qofka Aadanaha ee Musiibooyinka: Aragtida Cilmi-baarista
Kooxo iyo hay'ado badan ayaa leh baahi muhiim ah oo ah macluumaad sax ah oo ku saabsan sida dadku u dhaqmaan inta lagu jiro musiibooyinka. Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa macluumaad u muuqda inuu leeyahay qaddarin gaar ah oo loogu talagalay u diyaargarowga musiibada, xakamaynta, iyo soo-kabashada
Dadka Degaanka Maxay Ka Wanaagsan Yihiin?: Guusha La Yaabka Leh ee Lahaanshaha Sandy
Waa Khamiista, Noofambar 8, 2012 ee kaniisada St. Jacobi ee ku taal Sunset Park, Brooklyn. Waa maalin dhalaalaysa, oo qalalan. Toddobaad uun ka hor, Duufaantii Sandy waxay ku soo degtay Xeebta Bariga, iyadoo waxyeello u geysatay wax kasta oo soo socday. Magaalada New York, kumanaan guryo ah ayaa burburay ama daadad ku rogmadeen.
Qeybta Sagaalaad ee Hoose: iska caabin, soo kabasho, iyo cusboonaysiin
Kadib duufaantii Katrina ee 2005, New Orleans's sagaalaad Ward waxay astaan ​​u noqotay fashilka dadaallada soo kabashada iyo adkeysiga sinaan la'aanta iyo saboolnimada bulshada Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta laga fogeeyay beeshan waxay abuureysay ururo u ololeeya iyo sheeko-ka-hortagga la-dagaallanka takoorka iyo ku-dhaqanka dhaqankeeda oo macno leh.
Hantiwadaagga & Dimuqraadiyadda
Sannadka Kun-jirsiga iyo Muddada Cusub: Hordhac
Qorayaasha iskaashiga ah waxay ka wada hadlayaan "jihooyinka kun-jirsiga" ee Bidixda - "fowdo, dimoqraadi, caalami" - kahor / inta lagu gudajiray / kadib Seattle '99, iyo u wareegida dhanka hantiwadaagnimadii dib loowareegay sanadihii lasoo dhaafay.
Jaamacadda Miami School of Law
Dhaqdhaqaaqa cusub ee Faa'iido malaha: Afar Model ayaa ka jabaya isku dhafka warshadaha ee aan macaash doonka ahayn
Dhaqdhaqaaqayaashii qarnigii labaatanaad-oo ay dhiirrigeliyeen dhaqdhaqaaqyadii bulsheed ee ugu dambeeyay iyo dhaleeceynta "dhismaha warshadaha aan faa'iido doonka ahayn" - waxay sii kordhiyeen inay ka fogaadaan raacitaanka dhaqdhaqaaqyadooda iyada oo loo marayo kala-sarreynta, shirkadaha si aan faa'iido doon ahayn u maareeyay ee aan caadiga ahayn ee caadiga u ahaa ururrada caddaaladda bulshada ilaa 1970-naadkii
Machadka Daraasaadka Amniga iyo Falanqaynta
Shabakada Bulsho ee adkaysata
Saacado gudahood markii ay soo dhacday Sandy, xubno ka socda dhaqdhaqaaqa Occupy Wall Street - dhaqdhaqaaq bulsheed qorshaysan oo ka kooban u dhaqdhaqaaqayaasha bulshada oo ka mudaaharaadaya sinnaan la'aanta dakhliga ee Mareykanka - waxay adeegsadeen warbaahinta bulshada si ay u xiraan shabakadda ballaaran ee Shaqada ee mutadawiciinta iyo gargaarka. Habeenimadii, ciidan mutadawiciin ah oo dhalinyaro, aqoonyahanno, shaqsiyaad farsamo yaqaan ah oo leh waqti iyo rabitaan ah in la caawiyo dadka kale ayaa soo muuqday.
Kicitaanka Ururada Bulshada, Ka Qeybgalka Muwaadiniinta, iyo Hay'adaha Cusub
Ka dib duufaantii Katrina, kormeerayaashu waxay ka walwalsan yihiin in New Orleans laga yaabo inay ku sii socoto wadada muwaadinimada, khilaafaadka u dhexeeya bulshada, iyo musuqmaasuqa oo qayb ka ahaa sumcadeedii mudada dheer. Taa baddalkeeda, kormeerayaashu waxaa haleelay qulqulka hawlgallada muwaaddiniinta, soo ifbaxaya ururada bulshada ee cusub ama la dhiirrigaliyay, iyo baaqyada loogu jawaabayo dowladda.
Ku wajahan juqraafiga adag ee siyaasada ka soo kabashada musiibada: Aragtida laga qabo dhibaatooyinka iyo rajada
Maaddaama masiibooyinku ay sii kordhayaan saamayn ku yeeshaan saamiga weyn ee dadka oo leh awood sii kordheysa iyo soo noqnoqoshada waxay noqoneysaa xitaa mid aad muhiim u ah in la fahmo sida ka soo kabashada dhacdooyinkan ay u dhexdhexaadinayaan oo ay u maareeyaan bulshada.
Dissent, Jaamacadda Pennsylvania Press
Gargaarka Wadajirka ah U Beddel Shaqo Macno Leh
Markay dadku i weydiiyaan, anigoo ah weriye cimilada, waxa aan u maleynayo inay dhici doonaan marka xigta, jawaabtaydu waxay ahayd mid naxariisdarro ah oo aflagaado u ah aflagaadadeeda: "Faafida badan." Waxaa jiri doona faafa badan, oo ay keeneen xaalufinta, baabi'inta deegaanka, iyo astaamaha cudurada oo la kordhiyay cimilada kululaaneysa awgeed, dhammaantoodna ay ka mid yihiin faafitaankooda dabeecadda caalamiga ah ee dhaqaalaheena. Waxaan sidoo kale ognahay inay sii kordhayaan noocyada kale ee aafooyinka cimilada: dabka kaymaha, abaaraha, duufaanada, daadadka. Mustaqbalka waxaa ka buuxa musiibo aan kala joogsi lahayn.
U Nuglaanshaha iyo Awoodda Cadaaladda Bulshada Abaabulka ee Rockaway, Magaalada New York, ka dib duufaantii Sandy
Tani waa daraasad ku saabsan aafooyinka, u nuglaanta iyo awoodda. Marka la eego cadaaladda bulshada abaabulida mushkilad cilmi baaris gaar ah ayaa hagta shaqada, gaar ahaan mashaariicda madaxbannaanida waxaa inta badan bilaaba oo hogaamiya jilayaasha mudnaanta leh ee aan ka tirsaneyn beelaha la hayb-sooco ee ay rabaan inay xoojiyaan, laakiin shaqadu waxay ku saleysan tahay aaminaadda in awood-siinta ay u baahan tahay is-abaabulka gudaha.
Samafalku ma ina wada badbaadin doonaa? Dib uga fiirso samafalka magaalooyinka xilliyada dhibaatada
Ka dib markii uu dhacay faafida COVID-19, samafalayaasha ayaa si deg deg ah uga falcelisay baaqa gargaarka ee ka yimid Dowladaha iyo Ururada Caalamiga ah. Hase yeeshe, in kasta oo jawaabta badani ay jirto, haddana dareenka sii kordhaya waxaa loo keenay siyaabaha murugsan ee samafalayaasha iyo bilyaneerada ay ku xaqiijinayaan joogitaankooda ficilladooda iyo saamaynta ay ku leeyihiin dhinacyada kala duwan ee awoodda.
Daawo MADR YouTube Channel
Ka eeg MADR barta Instagram
Waxaan raadineynaa inaan koro! Haddii aad ku deeqi karto dhul, wa
Reer Louisiana & Texas - haddii aad nasiib leedahay
Waxaan ka murugooneynaa luminta abaabulaha baabi'inta iyo de
Load More ... Raac on Instagram